Ny tontonana vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alimika dia natao tamin'ny alàlan'ny fanongotana ny gloss ny loko vita amin'ny tontonana vita amin'ny aluminium. Ny gloss avo dia midika hoe ny famirapiratry ny fonosana tontonana. Amin'ny ankapobeny, ny takelaka dia ho mazava tsara raha eo anelanelan'ny 85 sy 95 degre ny gloss. Ny tontonana vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alimo dia avo kokoa noho ny an'ny acp acp mahazatra, izay mitondra fahatsapana fahitana mamirapiratra amin'ny olona.
Ny famirapiratan'ny volombava vita amin'ny alimina vita amin'ny perla dia avy amin'ny endrika voajanahary sy marefo izay namboarina. Nomena anarana izy noho ny lokony miovaova. Ny velaran'ny vokatra dia afaka maneho karazana perla tsara tarehy sy maro loko amin'ny fiovan'ny loharano sy ny zoro fijery.
Ny tontonana vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina dia misy sisiny roa voadio boribory vita amin'ny aliminioma mankany amina fotodrafitrasa polyethylene. Ny tontonana roa voadio vita amin'ny aliminioma dia manana toetra tsy mahazaka harafesina ary rehefa mifamatotra amin'ny fotony polyethylene dia mamokatra ny vokatra tokony hofaranana amin'ny alàlan'ny fikosehana.
Tizy Ny tontonana vita amin'ny aliminioma tsy mahazaka afo dia mandray ny akorandriaka vita amin'ny polymer fototra tsy dia lehibe loatra, noho izany ny fanatsarana ny afo tsy voadio dia nahavita nivoitra ary afaka mahatratra ny fenitra kilasy A ary mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny firafro ao amin'ny lalàna mifehy ny fananganana. Nandritra izany fotoana izany ihany koa dia namaky ilay sotasota ny tontonana nentin-drazana vita amin'ny aliminioma.
Fireproof Aluminium Composite Panel dia fitaovana fiarovana afo ho an'ny haingon-trano amin'ny rindrina.
Ny kanto manoloana ny tontonana vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina namboarina tamin'ny alàlan'ny fampiharana dingana tsy manam-paharoa famindrana sary amin'ny akanjo miloko fototra, dia misy loko voajanahary sy lamina voa .Ny fampisehoana an-tampon'ny birao mahatalanjona sy ny fisafidianana loko marevaka dia afaka manohana ny filan'ny mpamorona endrika hatramin'ny farany faran'izay betsaka, mba afaka mampihatra ny heviny mahafinaritra amin'ny fomba tsara indrindra izy ireo.
Ny fametahana vokatra valin-drihana vy dia afaka mamaha ny olana amin'ny tabataba. Rehefa ny loharanon'ny tabataba dia ao anatin'ny fehezin'ny fanamafisam-peo voafaritra, aorian'ny fandalovan'ny tabataba amin'ny fitaovana fanamafisam-peo, dia mipoitra ny fifandirana, izay manova ny angovo onjam-peo ho hafanana, amin'izay hampihena ny sandan'ny onjam-peo.
Ny veneer alimina tsy misy seamless dia ny hampihenana ny elanelana misy eo amin'ny tabilao sy ny tabilao mandritra ny fametrahana azy, ka ny iray manontolo dia milalao effets visuels milamina sy malama; ny sehatra mifangaro, mahafinaritra ary mampihetsi-po, ary ny fisaka manontolo dia mampiseho ny firafitry ny fotaka vy vita amin'ny aliminioma, izay afaka manatratra ny Lustra dia manome hatsarana sy fahadiovana maharitra, manatsara ny kalitaon'ny trano ary mamorona fiaraha-misakafo ara-panahy ho an'ny tontolo iainana!
Vary vita amin'ny alim-bary vita amin'ny hazo dia vita amin'ny takela aluminium alim-borona avo lenta, fitaovana haingon-trano modely vaovao mandroso, lamina avo lenta sy tsara tarehy, loko mazava sy firafitra, lamina matanjaka sy mahatohitra, tsy misy formaldehyde, tsy misy poizina , ary tsy misy famotsorana gazy manimba, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny fofona sy ny fahasimbana ara-batana ateraky ny loko sy ny lakaoly aorian'ny firavaka ianao, tena tsara ny kalitao, ary io no safidy voalohany amin'ny haingon-trano ambony.
Ny veneer aluminium vita amin'ny vato dia vita amin'ny alimina alimina avo lenta ho fitaovana lehibe. Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny famolahana CNC sy ireo haitao hafa arakaraka ny habeny, ny endriny ary ny rafitry ny tranokalan'ny tetikasa. Mampiasa horonan-tsary italianina vato italiana miorina amin'ny famafazana fluorocarbon eny amboniny. Izy io dia fitaovana haingon-trano metaly avo lenta izay voahodina mba hamindrana ny sarimihetsika vato amin'ny firakotra fluorocarbon an'ny veneer aluminium.
Ny valindrihana mihantona dia afaka mamolavola mora foana ny haben'ny valindrihana arakaraka ny takiana amin'ny habakabaka. Aorian'ny fametrahana ny rafitra keel dia azo ampidirina sy avoaka amin'ny tanana tsy misy fitaovana fanampiana izy io, izay malefaka sy tsotra.